MediaTek Helio P90: Ihe nhazi ohuru maka njedebe di elu | Gam akporosis
Helio P90: MediaTek usoro ohuru ohuru
MediaTek dị n'etiti mmeghari ohuru nke usoro nhazi ya. Ná ngwụsị nke Ọktọba ha gosipụtara Helio P70, anyi ekwuola ya. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ izu abụọ gara aga ụbọchị ekpugherelarị nke usoro nhazi ọhụrụ ọhụụ egosiworị, nke bụ onye ọzọ karịa Helio P90. N’ikpeazụ dị ka anyị gwara gị n’oge ya, emeputala ihe nhazi a taa. Anyị nwere nkọwa niile.
Site na nhazi a, MediaTek hapụrụ anyị ya na igwe nhazi ya kachasị mma. Helio P90 pụtara ìhè maka ike ya na arụmọrụ ya, na mgbakwunye na ọnụnọ nke ọgụgụ isi na ihe osise ka mma. Na nkenke, ndozi dị mkpa nke akara ahụ na-achọ ịkwalite n'ahịa ahụ.
MediaTek na-enye anyi ihe nhazi nke puru iche na ya 12 nm ije. Nke a bụ akụkụ bụ isi maka ika ahụ. Dị ka ọ dị na mbụ na ndị nhazi nke ọkwa a, ọgụgụ isi na-arụkwa ọrụ dị mkpa na ya. Ihe nhazi nke ndi China jiri eme ka ocha gosiputa ikike.
1 Helio P90 nkọwa
2 MediaTek Amamịghe echiche
Helio P90 nkọwa
Nkọwa kachasị mkpa nke MediaTek Helio P90 ndị a:
Ndị nhazi CPU: Anụ abụọ Arm Cortex-A75 cores na-ekpuchi na 2.2 GHz na isi isii Arm Cortex-A55 na-ekpuchi na 2.0 GHz
GPU: Ike IMG PowerVR GM 9446 GPU
RAM: rue 8GB 1866MHz LPDDR4x
Ihuenyo: Kwado mkpebi 2520 × 1080 na mkpebi 21: 9
Nzube nke artificialIhe: APU 2.0
Njikọ: Dual 4G SIM, Cat 12/13 4G LTE Mọdem nwere 4 × 4 MIMO, 3CA, 256QAM:
Ndị kamera: rue 48 MP na otu ihe mmetụta ma ọ bụ 24 + 16 MP n'ihe banyere usoro abụọ
Usoro akwa: 12nm
MediaTek ahọrọla Nchikota abuo isi nke ike di elu na isii ozo di nkpa. Ọ bụ ezie na n’ime isii ndị a, anyị na-ahụkwa nnukwu ọsọ elekere. Ya mere, ọ na - ebute ihe nhazi edozi, yana site na nke a na - atụ anya nnukwu arụmọrụ oge niile.
N'ihi Helio P90, A na-ewebata nkwado maka 8GB RAM. Ọnụ ego dabara na ihe anyị na-ahụ n'ụdị dị n'etiti na nke kachasị elu taa. Ha achọpụtawokwa ihe anyị na-ahụ banyere igwefoto taa. Ebe ọ bụ na ha na-akwado otu oghere 48 MP ma ọ bụ nchikota ruo 24 + 16 MP ma ọ bụrụ na enwere ihe mmetụta abụọ. Yabụ foto ga-arụ ọrụ dị mkpa na nhazi a nke akara ndị China.
MediaTek Amamịghe echiche
Obi abụọ adịghị ya, otu akụkụ dị mkpa na Helio P90 bụ ọgụgụ isi. E webatara ya n’otu APU 2.0, nke bu uzo nke ntuziaka na algọridim nke na-ekwe ka nhazi ahụ nwere onwe ya site na ngụkọta oge ọrụ mgbe ha metụtara ọgụgụ isi. Dịka ọmụmaatụ, nchọpụta nke ndị mmadụ, mmegharị ma ọ bụ ihu ihu igwe nke anyị nwere n'ọtụtụ ngwaọrụ. Typesdị ọrụ ndị a na-ezo aka site na ika ahụ.
MediaTek na-ekwu na ije a dị okpukpu anọ karịa nke bu ya ụzọ. Ya mere, akara ndị China etinyela mgbalị dị ukwuu iji meziwanye ihe na mpaghara a. Ọ bụ ọganihu dị mkpa iji ngwa nke eziokwu gbakwunyere, eziokwu dị adị ma ọ bụ ihu ọhụụ dị elu nke anyị na-ahụ n'ahịa.
Dị ka a tụrụ anya, mmelite niile nke ọgụgụ isi na-enye na Helio P90, na-erute foto. Igwefoto nke ekwentị na-eji nke a processor ga-mma. Ndozi na echere anyi dika otu Mbelata mkpọtụ, gbado anya ngwa ngwa na nke ziri ezi, na mgbakwunye na ọgụgụ isi ahụ ga-enyocha ha iji nye anyị ezigbo nsonaazụ mgbe anyị na-ese foto.
MediaTek nwere ịtụnanya ịkụ nzọ na ihe nhazi 4G. Ọ gaghị adị ruo etiti afọ na-esote mgbe onye nhazi mbụ nwere nkwado maka 5G nke akara ndị China bịara. Kedu ekwentị ga-eji Helio P90 anyị enweghị data maka ugbu a. Modelsdị ndị mbụ ga-erute na mmalite nke afọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Helio P90: MediaTek usoro ohuru ohuru
A mụrụ kpakpando na Super Fowlst rigs
[apk] MotoMusic, nke dị fechaa ma dị egwu